Fakan-tsary Samsung Galaxy S6 vs fakan-tsary iPhone 6 Plus | Androidsis
Mandritra ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge ilay mpanamboatra koreanina fakan-tsary nirehareha, mampitaha sary sy horonan-tsary sasany mamela an'i Apple sy ny iPhone 6 Plus amin'ny toerana tena ratsy. Izaho manokana tsy dia tia an'io fijery io. Heveriko fa tsy tokony hampitaha ny tenany amin'i Apple foana i Samsung, ankoatry ny hoe izaho dia avy amin'ny taloha "raha tsy hitako dia tsy mino aho" sekoly. Ankehitriny isika dia mahazo fampitahana sary sy horonantsary izay azontsika atao Ampitahao ny kalitaon'ny fakantsary an'ny Samsung Galaxy S6 Edge amin'ny sensor mahery an'ny iPhone 6 Plus. Iza no handresy?
1 iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
2 iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
3 Lahatsary voarakitra miaraka amin'ny iPhone 6 Plus
4 Lahatsary voarakitra miaraka amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge
5 iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
6 iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
7 iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
8 iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
9 iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
10 iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
11 iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
iPhone 6 Plus (ambony) vs Samsung Galaxy S6 Edge (ambany)
Notanterahina ny fitsapana a kinova tsy farany an'ny S6 Edge, Tsy maintsy raisina fa ireo singa izay nozaraina tamin'ny haino aman-jery manampahaizana manokana dia tsy manana kinova famaritana azo antoka momba ilay rindrambaiko, na dia azontsika atao aza ny mahazo hevitra momba ny kalitao eo amin'ireo fitaovana roa ireo. Ao amin'ny tapany ambony dia misy fakantsary namboarina tamin'ny fakantsary iPhone 6 Plus, raha eo amin'ny faritra ambany kosa dia misy ny sary nalaina niaraka tamin'ny Fakan-tsary Samsung Galaxy S6 Edge. Araka ny azonao zahana dia mampiseho ireo sary dseho samy hafa misy jiro isan-karazany noho izany, na dia mety ho feno kokoa aza ny fitsapana, amin'izao fotoana izao dia ampy kokoa ny maka hevitra hoe iza no terminal manolotra sary tsara kokoa.
Lahatsary voarakitra miaraka amin'ny iPhone 6 Plus
Lahatsary voarakitra miaraka amin'ny Samsung Galaxy S6 Edge
Misy ihany koa ny horonan-tsary mampiseho ny horonan-tsary azo raisina amin'ny alàlan'ny fitaovana roa. Na dia tsy maintsy raisina izany ny S6 Edge dia manana tombony mazava amin'ny fananana fanohanana 4K UHD, raha ny iPhone 6 Plus dia voafetra amin'ny 1080p.
Raha mijery ireo sary dia heveriko fa izany Ny fakantsary Samsung Galaxy S6 Edge dia tsara kokoa noho ny iPhone 6 Plus, na tery aza. Ny sarin'ny S6 dia misy volomboasary volomboasary, raha ny an'ny iPhone 6 Plus kosa dia lafo loatra ary fotsy be loatra.
Ny fehin-kevitrao? ny tsara kokoa ny isan'ireo fakana sary nalaina tamin'ny fakan-tsarin'ny Samsung Galaxy S6 noho ny iPhone 6 Plus, indrindra amin'ny tontolo maivana. Toerana ho an'ny Samsung sy ny fakantsary Galaxy S6 ary S6 Edge!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Fampitahana ny sary nalaina tamin'ny Samsung Galaxy S6 Edge sy ny iPhone 6 Plus
Satria tian'izy ireo ho tsara kokoa ny iPhone, andao atrehana izany isaky ny mampiditra ny prosesadores sy manasongadina zavatra tsara lavitra noho ny iPhone i Samsung
Saul Severin dia hoy izy:
Mamaly an'i saul severino
Fa raha forum Android miharihary dia handresy ny vahindanitra ...